Duulimaadyada ayada oo aan la aadeyn - Sidee bay u shaqeeyaan iyo maxay yihiin faa'iidooyinkooda? | Safarka Absolut
Ma jeceshahay safarka?. Hadday jawaabtu haa tahay, hubaal waxaad tahay mid ka mid ah dadka ku raaxeysanaya booqashada meelo kala duwan, oo aad ku qoyneyso dhaqamo iyo cunno kala duwan. Waa hab aan nafteenna u oggolaan karno in lagu qaado ruuxaas bilaashka ah ee dadka jecel safarku ay badanaa leeyihiin.
Taasi waa sababta ay duulimaadyo aan la aadeyn iyagu waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu bixiyo dhadhankeenna. In kasta oo qayb weyn oo ka mid ahi qorshaynayso halka ay ku wajahan yihiin iyo safarkooda bilo ka hor, badhkoodna wax dhib ah kuma qabaan qaadashada hal jiho ama dhinaca kale. Markaad dabacsan noqon karto maalmaha aad fasaxa tahay, xulashadan duulimaad ee aada adigaa iska leh. Raadi sida ay u shaqeeyaan iyo meesha aad ka heli karto!
1 Maxay yihiin duulimaadyo aan la aadeyn
2 Faa'iidooyinka duulimaadyada aan lahayn halka loo socdo
3 Sida loo helo duulimaadyo aan la aadeyn
4 Sidee duulimaadyada aan duulimaadku shaqeynin u shaqeeyaan
Maxay yihiin duulimaadyo aan la aadeyn
Magaciisu wuxuu durba na siinayaa wax ka badan hal tilmaam. Waa hab aan nafteenna ugu bilaabayno tacabur. Taasi waa, haddii aanaan maskaxda ku haynin meel cayiman, laakiin markaan raadineyno duulimaadka, waxaan u oggolaannay nafteenna in ay naga qaadaan safaradaas aan yareyn codsigooda ama kuwa daqiiqadaha ugu dambeeya la bixiyo. Markaa ma jiri doono wax qorsheyn ah, oo bilooyin, nooga jira shaki. Haa, waa run in laga yaabo in qof kastaa uusan dooran doorashadan, laakiin dabcan waxay leedahay faa'iidooyin badan. Kaliya waa inaad ka fikirtaa maalmahaaga fasaxa oo aad markaa gasho boggaga duulimaadka oo aad doorato mid ka mid ah, kaas oo tagaya meel fog.
Faa'iidooyinka duulimaadyada aan lahayn halka loo socdo
Mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ayaa ah inaad heli karto dhab gorgortanka duulimaadyada ama safarada guud. Tani waa sababta oo ah markay jiraan kuraas yar oo faaruq ah, shirkaduhu inta badan waxay hoos u dhigaan qiimayaashooda si ay u dhamaystiraan safarka. Sidan oo kale, laga yaabee dhowr saacadood ka hor, waxaad ogaan doontaa jihada safarkaaga soo socda. Marka, dhinac waxaan kaheleynaa faa iidada lacagta, inaan waxbadan keydin doono.
Dhinaca kale, waxaa jira mid waxaan booqan karnaa meelo fogfog. Sababtoo ah dalabyadan ma aha oo kaliya inay aadaan meelaha ugu badan ee la codsado. Xaaladdan oo kale, xitaa kuwa haysta dalxiisayaal ka yar, iyaguna waxay nooga tegayaan fursad aan ku helno heshiisyo wanaagsan. Waxaan si fudud ugu baahanahay inaan galno matoorada raadinta oo aan ogaanno wax kasta oo ay noo hayaan.
Sida loo helo duulimaadyo aan la aadeyn
Nasiib wanaagse, waxaan haysannaa tiro badan boggaga internetka iyo makiinadaha wax lagu raadiyo isku mid ah Dhexdooda, waxaan ka heli doonnaa ikhtiyaarro aan dhammaad lahayn markay tahay helitaanka duulimaadyada noocan ah. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waa Skyscanner, Kayak, eDreams ama Lastminute, iyo kuwo kale oo badan. Tallaabooyinka la raacayo waa kuwo aad u fudud:
Marka hore waa inaad gasho galka raadinta duulimaadka. Markaad halkaa gaarto, waxaad dooraneysaa meesha asalka ah halkii aad ka dhigan laheyd meesha aad u socoto, waxaad dooran doontaa 'Meel kasta'.
Waa runtaa haddii aad u aragto inay ka sahlan tahay, waxaa jira bogag kuu oggolaanaya inaad adigana sidaas oo kale sameyso, laakiin adoo fiirinaya khariiddada. Tani waa sida dhammaan meelaha tagaya asalka aad dooratay.
Mana tilmaami doontid taariikhda gaarka ah. Tani waxay na tusi doontaa duulimaadyada kala duwan, maalmaha iyo waqtiyada kala duwan. Sidaa awgeed, noocyadu waa dhadhanka waxaanan dooran karnaa midka innagu habboon.
Xanuun ma leh iska diiwaan geli qaar ka mid ah websaydhada oo sidaas ku hel wararkii ugu dambeeyay. Waxaad ka heli doontaa xilligan dhammaan duulimaadyadaas iyo meelaha xiisaha leh iyo sidoo kale dalabyo waaweyn.
In la sii wado doorashada dalabyo noocan ah duulimaadka ah, jidadka isku dhafan ayaa lagu tusi doonaa. Waxaa laga yaabaa inaad sameyso joogsi iyo bedelida diyaaradaha, laakiin tani waxay kuu daayneysaa waqti badan inaad ku raaxeysato waddanka ay tahay inaad istaagto isla waqtigaasna, waxaad badbaadin doontaa xoogaa lacag ah.
Sidee duulimaadyada aan duulimaadku shaqeynin u shaqeeyaan
Sidaan soo aragnay, duulimaadyada aan duulimaadyada laheen waxay leeyihiin hanaan aad u fudud. Waxaan kaliya u baahanahay inaan raadino duulimaadyada ka bilaabanaya asalkeenna oo aan dooranno 'Meel kasta oo loo socdo'. Haddii aad xoogaa dabacsanaan leedahay, websaydhyada sida Skyscanner ayaa kuu oggolaanaya inaad wax ku raadiso 'Bil ugu jaban'. Maxaa kaa dhigaya inaad hesho shaashad cusub, oo duulimaadyada ugu raqiisan yihiin. Mar alla markii aad hesho meesha aad ku socoto iyo sidoo kale taariikhda adiga kugu habboon, waxaad dhigan doontaa boos celinta sida caadiga ah.
Waxaad awoodi kartaa Samee boos celis sida safar gooni ah. Kaliya waa inaad iska hubisaa inuu kaaga jaban yahay. Waxaa la mid ah miisaanka aan soo sheegnay. Xaqiiqdii haddii duulimaadkaagu uu leeyahay joogsiyo badan, sida ugu fiican ayaa kugu kici doonta. Sida aan ognahay inaadan dhib ka qabin inaad ka guurto hal meel oo aad u guurto meel kale, markaad raadineyso safarka noocan ah, had iyo jeer ha dhigin garoonka diyaaradaha ee kuugu dhow. Dooro qof kale oo aan gacanta ka bixin sidoo kale, maxaa yeelay mararka qaarkood waxaa jira waxyaabo badan oo kala duwanaan ah. Xusuusnow inaad iska ilaaliso xilliga sare, maxaa yeelay way kugu adag tahay inaad hesho fursadaha noocan ah. Waxaa la mid ah maalmaha fasaxa ah. Had iyo jeer way fiicantahay inaad Talaado ama Arbaco aad fiiriso. Hadda waad ogtahay: Duulimaadyada aan lahayn meel loo socdo, iyada oo aan lahayn taariikh go'an oo la adeegsado isbarbardhigayaal, waxaan heli doonnaa fasax ku habboon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Duulimaadyada aan la raacin, sidee u shaqeeyaan?
Berlin 3 maalmood gudahood
Magaalooyinka ugu quruxda badan Spain